विश्व Archives - Page 61 of 63 - Medianp
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख २५, २०७४१७:४३0
नयाँदिल्ली, २५ वैशाख । दक्षिण भारतीय राज्य तामिल नाडू प्रान्तीय राजधानी चेन्नाइमा अवस्थित एक आवासीय भवनमा सोमबार भएको आगलागीमा परी कम्तीमा चार व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यस आगलागीमा परी अन्य पाँचजना घाइते भएका एक वरिष्ठ
फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा माक्रों विजयी, को हुन् उनी ?
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख २५, २०७४०८:१५0
काठमाडौं, २६ बैशाख । फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा माक्रो जियी भएका छन् । माक्रोंले प्रतिद्वन्द्वी मारिन ल पेनलाई ठूलो अन्तरले हराउँदै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । आइतबार भएको दोश्रो तथा अन्तिम चरणको मतदानमा पूर्व अर्थ मन्त्री एमानुएल
उत्तर कोरियामा अमेरिकी नागरिक पक्राउ, अब के होला ?
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख २५, २०७४०८:०२0
काठमाडौं, २५ बैशाख । उत्तर कोरियामा एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ गरेको छ । उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था केसिएनएले आफ्नो देश विरुद्ध शत्रुतापूण व्यवहार गरेकाले अमेरिकी नागरिक किम हक–सङलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ । उत्तर कोरियाको
एक फोटोग्राफरले देखाइन्, साउदीमा महिलाहरुको जिवन कसरी वित्छ ?
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख २४, २०७४१३:३१0
काठमाडौं, २४ बैशाख । साउदी अरबमा एक महिलाहरुको समुहलाई पुरुषहरुको नेतृत्वबाट स्वतन्त्रता मिल्न लागेको छ । स्थानीय संचार माध्यमहरुका अनुसार किङ सलमानले अर्डर पास गरेको छ की महिलाहरुले पुरुषको नेतृत्वविना नै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग
चीनका कारण तनाव बढ्यो : अमेरिका
Media NPप्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख २३, २०७४१४:३१0
काठमाडौं, २३ बैशाख । हिन्द महासागरमा चीले सक्रियता बढाएको भन्दै अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अमेरिकाले चीनको ‘वान बोल्ट वान रोड’ देखाउँदै चीनले हिन्द महासागरमा प्रभाव जमाउनुको कारण शंकास्पद भएको बताएको छ । अमेरिकाले भारत
भारतमा अक्षय कुमारसहित चार जना बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको फैसला
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २२, २०७४१५:४१0
काठमाडौं, २२ वैशाख । भारतमा चार जना बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ । भारतको सर्वाेच्च अदालतले शुक्रबार निर्भया काण्डका चार जना दोषिलाई मृत्युदण्डको सजायलाई सदर गरेको हो बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । तल्लो अदालतले मुकेश, पवन,
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २२, २०७४१३:३८0
बेइजिङ्ग, २२ बैशाख । चीनमै पहिलो पटक उत्पादित भीमकायको जेट विमानले चिनियाँ आकाशमा पहिलो परीक्षण उडान भर्ने भएको छ । एकसय अन्ठाउन्न सीट क्षमताको सि–९१९ मोडेलको उक्त जेट विमानले राजधानी बेइजिङ्ग पछिको चीनकै विशाल महानगर
वेलायती महारानी एलिजावेथका पति राजसंस्थाको जिम्मेवारीबाट मुक्त
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २१, २०७४१५:१९0
काठमाडौं, २१ वैशाख । वेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितियाका पति ९५ वर्षीय राजकुमार फिलिप राजसंस्थाको जिम्मेवारीबाट अलग भएका छन् । वेलायती राजसंस्था बकिङघम प्यालेसले फिलिप राजसंस्थाको जिम्मेवारीबाट अलग भएको जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ । बीबीसीका अनुसार
उत्तर कोरियासँग युद्धको खतराकाबीच अमेरिकाले गर्‍यो मिसाइल परिक्षण
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २१, २०७४१२:००0
काठमाडौं, २१ बैशाख । अमेरिका र उत्तर कोरियाबी बढ्दो तनावकाबीच अमेरिकाले बुधबार मिसाइल परिक्षण गरेको छ । क्यालिफोर्नियाबाट संसारभरी परमाणु हतियार लैजान सक्ने मिसाइल परिक्षण गरिएको हो । यो मिसाइलबाट अमेरिका ४२०० माइलको दुरी तय
अमेरिका र उत्तर कोरियालाई चीनको कडा चेतावनी !
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २१, २०७४०९:०५0
काठमाडौं, २१ बैशाख । कोरियाली प्रायद्वीपमा निरन्तर बढ्दो तनावकाबीच चीनले अमेरिका र उत्तर कोरियालाई शान्ति कायम गर्न चेतावनी दिएको छ । बढ्दो तनावकाबीच चीनले उत्तर कोरिया संकटमा सबै पक्षलाई शान्तिको पक्षमा उभिन आग्रह गरेको हो ।